Toetr’andro : mihaodihaody ny rivodoza Daya | NewsMada
Nivadika ho rivodoza ary nomena anarana Daya ilay faritra andro ratsy ao amin’ny ranomasimbe Indianina. Rivodoza fahefatra tato amin’ny fari-dranomasina misy antsika ity Daya ity.
Omaly, tany amin’ny 500 km atsinanan’i Farafangana no nisy ny foibeny. Mizotra mianatsimo atsinanana ny diany ary mihamanalavitra an’i Madagasikara hatrany. Tsy misy atahorana araka izany ny fiantraikany amin’ny toetr’andro eto amintsika.
Manamafy ny filazana ny mpamantatra ny toetr’andro ny amin’ny fanafoanan tanteraka ny filazana loza manerana ny Nosy. Na izany aza, mila mitandrina hatrany ireo mpiandriak sy mpitatitra an-dranomasina any Atsimo Atsinanana fa hitsoka mafy ny rivotra.
Hihamazava ary hihamaina tsikelikely ny andro hatramin’ny faran’ny herinandro. Afaka manararaotra ny toetr’andro mibaliaka ireo mankalaza ny fetin’ny mpifankatia na ho eto an-dRenivohitra sy ny manodidina na any amin’ny faritra.
Herintaona toy izao anefa raha tsiahivina, analiny ny traboina, ampolony ny maty sy lasan’ny rano ary betsaka ny trano sy tanàna dibo-drano. Efa nambaran’ny mpamantatra ny toetr’andro fa anisan’ny taona ho vitsy rivodoza ity taona ity na eo aza ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Tsy mbola tapitra anefa ny vanim-potoan’ny fahavaratra ho an’i Madagasikara ka mila mivonona amin’izany hatrany isika.